Novonoina sa namono tena? vehivavy hita faty nihantona | NewsMada
Novonoina sa namono tena? vehivavy hita faty nihantona
Mitovy fa tsy sahala amin’ilay tranga teny Andraisoro. Vehivavy iray manodidina ny 50 taona no hitan’ny olona maty nihantona tamin’ny fefy, tao ambadiky ny lapan’ny antenimeram-pirenena Tsimbazaza, afakomaly.
Nahitana fatim-behivavy iray nihantona koa teo amin’ny fefy vy ambadiky ny lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza, afakomaly. Raha ny fahitana azy teny an-toerana, tamin’ny fotoana nahitana ny razana, mbola teny an-kodiny ny fitafiany ary ny akanjony sy ny tanany havanana no misaringotra eo amin’ny fefy vy. Ny olona sendra nandalo teny an-toerana no nahita ilay fatim-behivavy nikirozaroza teo amin’ny fefy. Araka ny fanazavan’ny polisy, renim-pianakaviana manodidina ny 50 taona mahery eo ity hita faty ity ary olona tsy manan-kialofana izy. Tsy fantatra mazava izay tena antony nahafaty azy, raha ny tombana ivelany nataon’ny mpanao fanadihadiana, ahina ho namono tena izy, saingy ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy no mamaritra ny marina rehetra momba ity fahitana fatin’olona ity. Voalazan’ny mpanao fanadihadiana fa nahenoana fofon-toaka ity renim-pianakaviana hita faty ity tamin’ny nampidinana ny fatiny. Tsy fantatra aloha hatreto ny fianakaviana ary milaza ho tsy mahafantatra azy ny ankamaroan’ireo olona teny amin’ny manodidina an’i Tsimbazaza.
Resabe teny amin’ny manodidina an’i Tsimbazaza, toy ilay renim-pianakaviana hita faty teny Andraisoro koa ity fatim-behivavy hita teny Tsimbazaza ity. Hatrany anaty tambajotran-tserasera “facebook” aza samy nanan-kambara momba ity raharaha ity . Misy milaza fa fanakorontanana sy fampihorohoroana saim-bahoaka ny vonoan’olona toy izao. Lasa mitaintaina ny ankamaroan’ny olona manoloana ny fahitana fatin’olona mihantona, nandritra iny herinandro iny. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana momba ity fahitana fatin’olona teny Tsimbazaza ity.